Ucingo: +86 (0) 574-87179765
IMINININGWANE EBALULEKILE MAYELANA NOKUQALA KWE-CORONAVIRUS
Okwenziwa ngabasebenzi abasebenza olwandle (okusho ukuhlangana, ukuvakasha njll) eRumotek futhi bazoxhumana nabasebenzi baseRumotek, abasebenzi bazoqinisekisa ukuthi lokhu okulandelayo kuyagcwaliseka: izwe ngaphandle kweChina. • ...
Omazibuthe beNeodymium (obizwa nangokuthi “NdFeB”, “Neo” noma “NIB” odonsa) bangamazibuthe anamandla anomphela enziwe nge-neodymium, iron ne-boron alloys. Ziyingxenye yochungechunge lukazibuthe womhlaba ongajwayelekile futhi zinezici eziphakeme kakhulu zikazibuthe zazo zonke izibuthe ezihlala njalo. Ngenxa yeti ...
Ukwandiswa kwezindleko zempahla eluhlaza ezingavamile zomhlaba
Ishadi lentengo likhombisa ukuthi izindleko zempahla eluhlaza yamakhemikhali eRare Earth Neodymium zibe nokwenyuka okuphawulekayo emasontweni ambalwa edlule. Lokhu kwenza amanye amakhasimende akhathazeke ngezindleko zemikhiqizo yawo futhi abuze ukuthi kuzoba yini umkhuba ezinyangeni ezilandelayo nokuthi kufanele asabele kanjani.
Kungani ama-Samarium Cobalt no-Magnets we-Neodymium Ebizwa Ngozibuthe “Bomhlaba Ongajwayelekile”?
Kunezakhi zomhlaba eziyishumi nesikhombisa ezingavamile - eziyishumi nanhlanu zazo ezingama-lanthanides kanti ezimbili zazo okuyizinsimbi zenguquko, i-yttrium ne-scandium - ezitholakala ngama-lanthanides futhi ziyafana ngokwamakhemikhali. I-Samarium (Sm) ne-Neodymium (Nd) yizakhi ezimbili zomhlaba ezisetshenziswa kakhulu ezingavamile kuhlelo lokusebenza kazibuthe ...
I-Neodymium: Isizinda esincane i-Neodymium yatholwa ngo-1885 ngusokhemisi wase-Austrian uCarl Auer von Welsbach, yize ukutholwa kwayo kwaletha impikiswano - insimbi ayikwazi ukutholakala ngokwemvelo ngesimo sayo sensimbi, futhi kufanele ihlukaniswe ne-didymium. Njengoba iRoyal Society of Chemistry iphawula, ...
Yiziphi Izinhlobo Zensimbi Ezihehwa Ozibuthe beNeodymium?
Sonke siyazi ukuthi odonsa badonsana ezigxotsheni eziphambene futhi baxoshe ezigxotsheni ezifana nezigxobo. Kepha yiziphi izinhlobo zensimbi abazihehayo? Ozibuthe beNeodymium baziwa njengezinto zikazibuthe eziqine kakhulu ezitholakalayo futhi banamandla amakhulu okubamba kulezi zinsimbi. Babizwa ngemeta ye-ferromagnetic ...
Omazibuthe ezindabeni: Ukuthuthuka Kwamuva Kokuhlinzekwa Kwezinto Zomhlaba Ezingavamile
Inqubo Entsha Yokusebenzisa Kabusha Amagnethi Ososayensi endaweni yokucwaninga i-Ames benze indlela yokugaya baphinde baphinde benze ozibuthe be-neodymium abatholakala njengengxenye yamakhompyutha alahliwe. Le nqubo yathuthukiswa eMnyangweni Wezamandla Wezinto Ezibalulekile eMnyangweni Wezamandla wase-US (CMI) ogxile kwezobuchwepheshe ...
Ikheli: 11th Floor Xinwang Building, NO.1 Jiheng Road, Haishu District, NB 315176
Ifekisi: +86 (0) 574-87179763